Separated shoulder (ပုခုံးကွာထွက်ဒဏ်ရာ) - Hello Sayarwon
Separated shoulder (ပုခုံးကွာထွက်ဒဏ်ရာ) ကဘာလဲ။
ပုခုံးကွာထွက်ဒဏ်ရာဆိုတာညှပ်ရိုးနှင့်ပုခုံးပြင်ရိုးတို့ကို တွယ်ဆက်ထားသောအရွတ်များ ထိခိုက်မိခြင်းဖြစ်သည်။
ဒဏ်ရာမပြင်းလျှင် အရွတ်များဆန့်ထွက်ရုံသာ ဖြစ်ပြီး ဒဏ်ရာပြင်းထန်လျှင် အရွတ်များစုတ်ပြဲသည်အထိ ဖြစ်နိုင်သည်။
လူအများစုတွင် ပုခုံးကွာထွက်ဒဏ်ရာကို ခွဲစိတ်ပြုပြင်ရန်မလိုပါ။ အနားပေးခြင်း၊ ရေခဲကပ်ခြင်း၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးစသော ကုထုံးများဖြင့် နာကျင်မှုသက်သာနိုင်သည်။ အများစုတွင် ရက်သတ္တပါတ်အနညှ်ုးယ်အတွင်း ပုခုံးကိုပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ကြသည်။
Separated shoulder (ပုခုံးကွာထွက်ဒဏ်ရာ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ပုခုံးကွာထွက်ဒဏ်ရာသည် အလွန်အဖြစ်များသည်။ အမျိုးသမီးများတွင် အမျိုးသားများထက်ပိုဖြစ်နိုင်ပြီး အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု မြင့်မားစေသော အကြောင်းများကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်သည်။ ထပ်မံသိရှိလိုသည်များကို ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Separated shoulder (ပုခုံးကွာထွက်ဒဏ်ရာ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ပုခုံး သို့မဟုတ် လက်မောင်းအားနည်းခြင်း
ပုခုံးကို ပုံမှန်အတိုင်း မလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း
ပုခုံးပေါ်တွင် အဖုထွက်လာခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
ညှပ်ရိုးအဆုံးနားတွင် နာကျင်ခြင်း အထိမခံနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ အထက်ပါ ရောဂါလက္ခဏာများရှိပါက၊ သိလိုသည်များရှိပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ လူတိုင်း၏ ခန္ဓါကိုယ်တုန်.ပြန်မှုများသည် မတူညီနိုင်သောကြောင့် သင့် ရောဂါလက္ခဏာအတွက် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ခြင်းသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Separated shoulder (ပုခုံးကွာထွက်ဒဏ်ရာ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အဖြစ်များဆုံး အကြောင်းအရင်းများမှာ ပုခုံးတစ်နေရာကို ရိုက်မိခြင်း၊ ချော်လဲရာတွင် ပုခုံးပေါ်တိုက်ရိုက်ကျခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ ထိုဒဏ်ကြောင့် ညှပ်ရိုးနှင့်ပုခုံးပြင်ရိုးတို့ကို တွယ်ဆက်ထားသောအရွတ်များ ဆန့်ထွက်ခြင်း၊ စုတ်ပြဲခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။
Separated shoulder (ပုခုံးကွာထွက်ဒဏ်ရာ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဘောလုံးကန်ခြင်း၊ ဟော်ကီကစားခြင်းစသော တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ကစားရသည့် ကစားနည်းများ၊ ချော်လဲနိုင်ခြေရှိသော နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ ဂျွမ်းဘား၊ ဘော်လီဘော စသော ကစားနည်းများ ကစားခြင်းသည် သင့်ကို ပုခုံးကွာထွက်ဒဏ်ရာ ရနိုင်ခြေမြင့်မားစေသည်။
Separated shoulder (ပုခုံးကွာထွက်ဒဏ်ရာ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်က စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် သိနိုင်သည်။ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဖြင့် ပုခုံးကွာထွက်ဒဏ်ရာဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဒဏ်ရာအတိမ်အနက်ကိုလည်း သိနိုင်သည်။ ဒဏ်ရာမပြင်းထန်သူများတွင် အစောပိုင်းရိုက်သော ဓါတ်မှန်များသည် ပုံမှန်အတိုင်း ဖြစ်နေနိုင်သည်။
Separated shoulder (ပုခုံးကွာထွက်ဒဏ်ရာ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အများစုတွင် မခွဲမစိတ်ဘဲကုသရုံဖြင့် ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အနည်းငယ်သာကွာလျှင် တစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်း ပြန်ကောင်းနိုင်ပြီး ပိုပြင်းထန်ပါက သုံးလေးပတ် သို့မဟုတ် လနှင့်ချီ၍ ကြာနိုင်သည်။ ထိခိုက်မိသော ပုခုံးပေါ်တွင် အဖုထစမြဲဖြစ်သော်လည်း ပုခုံး၏လှုပ်ရှားမှုကိုတော့မထိခိုက်သင့်ပါ။
အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်သော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ ဖြစ်သည့် စမေခေနအောသူယ ငဘကစမသ်နညယ ညစေမသထနည တို့သည် ပုခုံးနာခြင်းကို သက်သာစေသည်။
အနားယူခြင်း။ ပုခုံးကိုပိုနာစေသော အပြုအမူများကို ရှောင်ပါ။ အထူးသဖြင့် နာသည့်ဘက်လက်ကို ခန္ခါကိုယ်ရှေ့သို့ ကန့်လန့်ဖြတ်တင်ခြင်း။ ပုခုံးအပေါ်ဖိအားလျော့စေရန်နှင့် အနွေးဓါတ်ရစေရန် လက်ကို ယာယီသိုင်းထားပြီး မလှုပ်ရှားအောင်ထားနိုင်သည်။
ရေခဲကပ်ခြင်း။ ရေခဲသည် နာကျင်ခြင်းနှင့် ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေသည်။ တကြိမ်လျှင် ၁၅မိနစ်၊ မိနစ်၂၀ခန့် ကပ်နိုင်သည်။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားခြင်း။ အကြောလျှော့ခြင်း၊ ပုခုံးသန်မာစေသော လေ.ကျင့်ခန်းများ လုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်ပုခုံးကို ပြန်လည်သန်မာစေပြီး ပုံမှန်လှုပ်ရှားနိုင်စေသည်။
ခွဲစိပ်ခြင်း။ နာကျင်မှုမသက်သာလျှင်၊ ပြင်းထန်သော ပုခုံးကွာထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ညှပ်ရိုးကျိုးခြင်းတို့ ရှိလျှင် ခွဲစိတ်ခြင်းကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ခွဲစိတ်ခြင်းဖြင့် ပြဲသွားသောအရွတ်သောများကို ပြန်ဆက်ခြင်း၊ ဒဏ်ရာရသော အရိုးများကို နေရာချခြင်း၊ နေရာမရွေ့အောင်စီစဉ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Separated shoulder. http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00033. Accessed October 20, 2017
Separated shoulder. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/separated-shoulder/diagnosis-treatment/drc-20354054. Accessed October 20, 2017